Wararka - Qiimaha rarka ayaa kor u kacaya, qiimaha birta ayaa ku socota isbeddel hoos u socda
Biraha aan diiraneyn
Qiimaha rarka ayaa kor u kacaya, qiimaha birta ayaa ku socota isbedel hoos u dhac ah
Waxaa lagu soo waramayaa in saameynta ay ku yeelatay xayiraada Kanaalka Suweys oo todobaad socday awgood, in la xaddiday awooda maraakiibta iyo qalabka ee Aasiya. Toddobaadkan, xaddiga xamuulka qaada ee konteenarrada Aasiya iyo Yurub si aad ah ayey u kordheen. ”
Bishii Abriil 9-keedii, Heerka Ningbo Container Freight Index (NCFI) ee Waqooyiga Yurub iyo Badda Dhexe wuxuu kacay 8.7%, ku dhowaad wuxuu la mid yahay 8.6% kororka Santarka Xamuulka Weelka Shanghai (SCFI).
Faallada NCFI ayaa tiri: "Shirkadaha maraakiibta waxay si wada jir ah kor ugu qaadeen sicirka xamuulka bishii Abriil, sicirka tikidhada ayaa aad kor ugu kacay."
Marka loo eego tixraaca WDR ee Drewry, qiimaha xamuulka ee ka yimaada Aasiya ilaa Waqooyiga Yurub wuxuu kordhay 5% toddobaadkan, wuxuuna gaadhay $ 7,852 halkii cagood oo 40, laakiin xaqiiqda ah, haddii milkiilaha xamuulka uu heli karo waddo uu ku aqbalo ballansashada, qiimaha dhabta ah ayaa aad uga badan . .
WestboundLogistics, oo ah xamuul xamuul oo fadhigeedu yahay Boqortooyada Midowday, wuxuu yiri: "Qiimaha waqtiga-dhabta ah ayaa sare u kacaya, qiimaha muddada-dheer ama qandaraaskuna waa wax aan qiimo lahayn."
“Hadda tirada maraakiibta iyo meelaha bannaan ayaa xadidan, xaaladda waddooyin kala duwanna way ka duwan tahay. Helitaanka waddo bannaan ayaa noqotay hawl adag. Marka booska la helo, haddii qiimaha si dhakhso leh loo xaqiijin, booska ayaa dhowaan la waayi doonaa.
Intaas waxaa sii dheer, markabku xaalkiisu wuxuu umuuqdaa inuu kasii darayo kahor intaysan xaaladdu hagaagin.
Shirkii jaraa'id ee shalay, agaasimaha Hapag-Lloyd Rolf Haben Jensen wuxuu yidhi: "6 ilaa 8 todobaad ee soo socda, keenida sanduuqyadu way adagtahay.
"Waxaan rajeyneynaa in inta badan adeegyada ay tabi doonaan hal ama labo safar, taas oo saameyn ku yeelan doonta awooda la heli karo rubuca labaad."
Si kastaba ha noqotee, wuxuu intaas ku daray inuu "rajo wanaagsan ka qabo" inuu ku soo laabto sidii caadiga ahayd rubucii saddexaad ".
Falanqaynta xaaladda qiimaha birta
Birta Shiinaha ayaa dhoofisa isbeddelo cusub
Qiimaha rarka ayaa kor u kacaya, qiimaha birta ...
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2020: Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay. Alaabada Kulul - Khariidadda bogga